Ciidanka DANAB oo dib u howlgelinaya Ceelbiyood maleeshiyada Al-Shabaab ka gubeen dadka deegaanka Ceel-saliini - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Breaking News/Ciidanka DANAB oo dib u howlgelinaya Ceelbiyood maleeshiyada Al-Shabaab ka gubeen dadka deegaanka Ceel-saliini
Ciidanka DANAB oo dib u howlgelinaya Ceelbiyood maleeshiyada Al-Shabaab ka gubeen dadka deegaanka Ceel-saliini
MUQDISHO (WADANI)- Ciidamada DANAB ee Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa qorsheynaya iney dib u howlgeliyaan Ciil-biyood ku yaalo deegaanka Ceelsaliini oo Kooxda Nabad-diidka Al-Shabaab ay ka gubeen dadka deegaanka.
Dadka deegaanka Ceel-saliini ee Gobolka Shabeelaha hoose ayaa ka biyo diiday iney baad-siiyaan maleeshiyada Al-Shabaab,taas badalkeedan waxay Kooxda argagixisada gubeen Ceelkii Biyaha ay ka cabi jireen dadka deegaanka oo awalba la daala dhacayay dhibaatooyin kale oo dhanka nolosha ah.
Gaashaanle C/raxmaan Sheikh Cumar (Jini-qaar),taliyaha Ururka 4-aad ee Ciidanka DANAB oo hoggaaminayay howlgalka ayaa sheegay iney ku dadaali doonaan dib u howlgelinta Ceelka Deegaanka Ceel-salliini oo ay maleeshiyada Al-Shabaab gubeen.
“ Waxaan qabanay deegaanka Ceel-saliini oo u ahayd argagixisada taliskooda Guud,markii ay isku dayeen in shacabka lacago baad ah ka qaadaan shacabkiina uu diiday waxay ka gubeen Ceelbiyoodkii dadka ay biyaha ka cabi jireen,waxayna ku kalifeen dadka iney ka barakiciyaan deegaanka oo dhan,dadka Ceel-saliini ku nool waxay u aroor tagaan deegaanka N.50,inshalah waxaan ku dadaaleen inaan si deg deg ah u sameynayo Ceelbiyoodka shacabkeenna Soomaaliyeed,”ayuu yiri Taliye Jini-qaar.
Ugu dambeyntii, Taliyaha Ururka 4-aad ee Ciidanka DANAB Xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ciidanka ku sugnaan doonaan dhammaan deegaanadii laga saaray gacanta cadowga ummadda Soomaaliyeed,islamarkaana ku dadaali doonaan sidii shacabka nolol wanaagsan u heli lahaayeen.
Deegaanka Ceelsaliini wuxuu 20-km dhanka Waqooyi kaga beegan yahay magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha hoose,wuxuuna isku xiraa deegaanada Dhannaane,Gandarshe, N.60 iyo Deegaano kale,sidoo kalena wuxuu marin muhiim u ahaa maleeshiyada Al-Shabaab oo ka soo abaabuli jiray falalka guracan ee lagu gumaadayo Shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Khayre: Waxa aan idinkugu imid in aan idinkala shaqeeyo dhismaha Gul-mudug midaysan
Shir u dhaxeeya Ra’isalwasaare Rooble iyo Midowga Musharrixiinta oo ka furmay Muqdisho
Ceebtii ka dhalatay xil wareejin la’aantii Kheyre oo ku soo baxday Ra’iisul Wasaare Rooble(Dhagax-dhig yaab leh!).
“Al shabab waxa akoono Bangi Ku leeyihiin Salam Bank”, UN
Wasiirka Howlaha Guud iyo dib u dhiska XFS oo shirka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ka furay…